Ny tena sarin'ny Oppo Find X2 dia miseho alohan'ny hamoahana azy | Androidsis
Ny tena sary an'ny Oppo Find X2 dia miseho alohan'ny hanombohany
Fotoana fohy taorian'ny nanatrehantsika farany ny Mitadiava X2 avy amin'i Oppo, smartphone finday avo lenta havoaka miaraka amin'ny Mitadiava X2 Pro, izay zokiny lahy. Manokana, Ny 6 martsa no daty voatondro izay hahafantarantsika ny zavatra rehetra atolotry ny finday avo lenta.
Alohan'ny hahatongavan'io andro io Nivoaka ny tena sary an'ny Oppo Find X2. Ireo dia manamarina izay efa hitantsika tamin'ny sary teo aloha, fa mbola tsara ny manana ireo fitaovana amin'ny tena fiainana izay manome antsipiriany kokoa momba izay ho hitantsika amin'ity maodely ity.
Araka ny hita amin'ny sary vaovaon'ilay fitaovana, izay navoakan'ny mpisera Sven (@ Mutz1337) tamin'ny alàlan'ny Twitter, ny maodelin-tsary any an-damosina dia toa mipoitra be avy amin'ny tenan'ny vatanao. Misy modely zoom periskope etsy ambony, apetraka amin'ny aperture efajoro eo ambonin'ny marika "hybrid zoom".
The # OPPOFindX2 tsara be toa?
Tena faly amin'ny fanombohana pic.twitter.com/Y0Tx0EiOfT
- Sven (@ Mutz1337) Febroary 28, 2020
Misy koa fakan-tsary roa fanampiny ary maodely flash LED roa-LED. Ankoatry ny mpitifitra lehibe, dia mety hisy masom-paritra ultra-wide ihany koa. Eo aloha dia misy fakan-tsary selfie tokana, izay hita ao anaty fantsom-bolan'ny efijery, mifanaraka amin'ny ankavia eo an-tampon'ny efijery, izay toa somary miolaka ny sisiny.
Ny Oppo Find X2, toy ny Pro variant, dia ho avy miaraka amin'ny a Seho QuadHD + miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz sy santionany mikasika ny 240 Hz. Ho fanampin'izay, ho tonga miaraka amin'ny Snapdragon 865, Chipset mahery matanjaka indrindra an'ny Qualcomm izay valo-core, miaraka amin'ny Adreno 650 GPU ary mamokatra tahan'ny haingam-pandeha 2.84 GHz. Voalaza ihany koa fa hanana bateria mifanentana 65W fiampangana tariby haingana sy fiampangana haingana tsy misy tariby 30 W. Hamarino izahay ary hianatra momba ny toetra hafa sy ny lafiny teknika amin'ny 6 martsa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny tena sary an'ny Oppo Find X2 dia miseho alohan'ny hanombohany
Android 10 koa dia nahatratra ny Redmi Note 8 Pro tamin'ny alàlan'ny OTA vaovao